IDILESI YEMARBLE POOL (ISIKHOKELO SOYILO LWASEMVA KWENDLU) - AMACHIBI OKUDADA
Eyona amachibi Okudada Idilesi yeMarble Pool (Isikhokelo soYilo lwasemva kwendlu)
Idilesi yeMarble Pool (Isikhokelo soYilo lwasemva kwendlu)
Nasi isikhokelo sokuyilwa kwamaplanga emarmore kubandakanya ubuchule kunye neengozi kunye neentlobo ezithandwayo zezitayile zemarble. Njengoko amaqondo obushushu enyuka, lixesha elifanelekileyo lokutsiba echibini. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba ichibi lakho linendawo efanelekileyo yokuqubha ukubonelela ngendlela yokutsala amehlo ukuze uqiniseke ukuba iphuli yakho iyangena kubume bendawo yakho kwaye unendawo entle yokoma kwaye ujinga ngaphandle echibini.
Ukuba ufuna ukubonwa kobuhle beli xesha liphezulu kwiphuli yakho, iphuli yemabula yemarble inezibonelelo ezininzi. Kwesi sikhokelo, siza kuqhekeza yonke into oyifunayo malunga neephuli zamachibi emabhile ukuze ukwazi ukwenza ukhetho olufanelekileyo kukhetho lwakho kunye nembonakalo yomhlaba.
I-Marble Pool Deck Pros kunye ne-Cons
Idesika yePhuli yeMarble eSandblasted
Iimpawu zamachibi eMarble
Idikki yePhuli yeMarble emhlophe
IMarble okanye iTravertine yePhuli yePhuli
Kukho izinto eziluncedo nezingeloncedo kuzo naziphi na izinto onokuzisebenzisa njengendawo yokuhombisa echibini okanye ngenye indlela ejikeleze ikhaya lakho. Kungenxa yoko le nto siza kuqhekeza ezona ndawo zintle kunye nezona zimbi zamachibi emarmore ukukunceda wenze esona sigqibo silungileyo ekhayeni lakho.
Iinkonzo zeDisk Deck Pros
Uluhlu lweengoma zikayise
Izinto ezintle zamatye Kwenye, unokuthembela kwimarble kobuhle bendalo ejikeleze iphuli yakho. Kwaye, njengoko sele sijongile, kukho iindlela ezahlukeneyo onokuzisebenzisa ngemarble ukuze utshatise isitayile sakho.
Uluhlu lwemibala yemarble -Iplanga lephuli yemarble liyafumaneka kwimibala eyahlukeneyo yelitye. Unokufumana i-marble ngemibala enjenge-brown, cream kunye nesilivere.
Unyango lwe-razor bump kubantu base-Afrika baseMelika
Umphezulu opholileyo onokuhamba kuwo Iindaba ezimnandi zezokuba imarble ihlala ipholile ngokufanelekileyo. Oku kuthetha ukuba naxa ukonwabela ukudipha echibini ngeyona ndawo ishushu emini, awuzukuba naxhala malunga nokwenzakalisa iinyawo zakho kumgangatho wedama elishushu.
Ukuhlala ixesha elide kunye nemozulu I-Marble nayo ifunwa kakhulu ngenxa yokuba yinto eqinile. Enye into ebalulekileyo yokusebenzisa i-marble kukuba iyamelana nemozulu oko kuthetha ukuba awuyi kubona umonakalo ekusebenziseni ngaphandle kule minyaka idlulileyo.
Yongeza ixabiso lepropathi yasekhaya Okokugqibela, ukuba nedama sele kunyusa ixabiso lakho lepropathi kodwa usebenzisa imarble njengendawo yokuhombisa yeplanga ithambekele ekongezeni ixabiso lepropathi. Kukonke, kunokuba yinzuzo kwixabiso lepropathi xa kuthelekiswa nezinye izinto zedreyini yezixhobo.
Imarble Pool Deck Cons
Ewe, ayisiyiyo yonke into malunga nemabhile enokuba nethemba. Njengazo naziphi na ezinye izinto, kukho iingxaki ezimbalwa kwi-marble. Ezi zezona zinto ziphambili zemabhile omele wazi ngazo.
Ukutyibilika xa kumanzi -Njengoko inxulumene ngqo neephuli, uyakufuna ukulumka ukuba ibhastile linokutyibilika xa limanzi. Oku kuthetha ukuba xa usasaza amanzi kwi-marble esuka echibini okanye ulandele umkhondo weenyawo xa uphuma echibini, kunokubangela ukuba ipaki yakho yokutyibilika ityibilike. Ke, uya kufuna ukuba unonophele malunga noku ngakumbi ngokubaleka kwabantwana ngeenxa zonke.
Ixabiso eliphezulu -Elinye ikhonkco lemarble ngokwenyani linxulumene nepro yokugqibela esiyikhuphileyo. Njengento yokunethezeka, i-marble inokunyusa ixabiso lakho lepropati kodwa liza ngexabiso eliphezulu kunezinye izinto eziphathekayo. Ngethamsanqa, iindaba ezimnandi zezokuba ixabiso lepropathi elongeziweyo linokunceda ukunciphisa iindleko zangaphambili.
I-Marble iyakonakalisa - Ukuya kwinqanaba elincinci, uya kufuna ukulumkela ukungcolisa iphuli yakho yemabhile kuba iyinto enamanzi. Kwiphuli yedreyini, oku akuqhelekanga ukuba yingxaki kodwa ukuba ubamba amaqela eephuli ngokutya neziselo, umzekelo, licebo elihle ukuzama ukunqanda ukuchitheka nokucoca ngokuthe ngqo emva kokuba zenzekile.
ukuba wenze ntoni ngomhla
Imabhile emenyezelwe ngesanti igqityiwe ukuba nomgangatho omncinci, ongalinganiyo. Ngokuhlanjwa kwesanti emarble, kudala ukugqityezelwa okungaqhelekanga, kuqinisekiswe ukuba ukuthungwa kwahluke ngokupheleleyo.
Olu lukhetho olukrelekrele ngakumbi xa ukhathazekile malunga nokuba imarble emtyibilizi ingafumana njani enokuba yingozi xa kufikwa kumgangatho wedama.
isimanga somtshakazi kwintombazana ehloniphekileyo
Ukwenza isanti yomphezulu womhlaba, ubunjani obenzayo bunceda ukongeza ukubambeka kumgangatho wedama. Ngale ndlela, ayisiyonto ityibilikayo xa imanzi njengemabhile kunye nokugqitywa okupheleleyo kweephuli.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngelixa oku kuyakongeza ukubambeka kunye nokuthungwa kwimabhile, ayibhalwanga kangako kangangokuba ayizukuhamba kakuhle. Bona Okuninzi iintlobo zamachibi ezigqityiweyo Apha.
Ipeyinti yiyunithi nganye yento ebekwe njengeethayile okanye izitena. Oku kuthetha ukuba endaweni yesabile enye egudileyo yemabhile, ezi zinto zenziwe ngeplabhile zilungelelaniswe ngendlela ozifuna ngayo kwaye zingena kwisithuba.
Ungasebenzisa iiphuli zamachibi emabhile ukwenza iphethini eyongeza kubuhle bobuhle kuyilo kanye njengokubonakala kwemarble oyisebenzisayo. Kuyinyani nokuba uthatha isigqibo sokuba ipateni yemveli yethayile lolona khetho lufanelekileyo kwindawo yakho.
Xa isiza esiphelweni somntu ngamnye semarble, unokhetho oluninzi. Ngokomzekelo, ungasebenzisa iiplanga zeemabula kunye nokugqitywa kwe-sandblasted ukunciphisa indlela epholileyo ngayo indawo yokungena kwidonki xa imanzi.
I-marble emhlophe ihlala isetyenziswa kuyilo lwanamhlanje njengoko lubukeka kwaye lulula. Ihlala inxulunyaniswa nobunewunewu kuba ine-touch engathathi hlangothi kodwa entle.
Nangona kunjalo, imarble emhlophe isoloko inembonakalo yohlobo oluthile ngenxa yemithambo yendalo elityeni. Oku kuseta yonke i-slab yemarble ngaphandle elandelayo.
Iiphakheji zomtshato wase-hawaii zonke zibandakanya
I-Travertine yahluke kancinane kwimabhile. Ivela kwilitye lekalika kwaye lukhetho oluqhelekileyo xa kufikwa kumachibi edama. Oku kuyinyani ngezizathu ezimbalwa.
Ngenye, ekubeni i-travertine ifunxa amanzi ngokukhawuleza, lukhetho olufanelekileyo kumgangatho wephuli kuba awuyi kuhlala umanzi. Ngenxa yoku, inethuba lokungatyibiliki. Ngaphezulu kwelo, i-travertine ayibizi kakhulu kuneemabhile, isenza ukhetho olufanelekileyo kuye nawuphi na umninikhaya ohlahlo-lwabiwo mali.
Nangona kunjalo, azikho ezinye izibonelelo zemarble ngokunjalo. Kwelinye, ngelixa kungabizi mali iphambili ngaphambili, oku kukwathetha ukuba ayizukunyusa ixabiso lepropathi ngendlela efanayo nemarble. IMarble ikwanaso nesibonelelo esongezelelekileyo sokunikezela iphuli yakho kukuchukumisa okunethezeka.
Ekugqibeleni, wonke umninikhaya uneemfuno ezizodwa eziphendulwa ngeendlela ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, ukuba unomdla kutyalo-mali lwexesha elide malunga nokonga ixesha elifutshane, imarble lukhetho oluqhelekileyo.
Ukuyila ngakumbi ndwendwela igalari yethu ukubona ngakumbi Iiplanga zamachibi endalo .
zibiza malini izimemo zomtshato
esona sipho sisikhumbuzo sabazali
Ithetha ukuthini xa inetha ngemini yakho yomtshato
indlela yokuxelela ukuba idayimane iyinyani okanye inkohliso